Maitiro eku Embed a PDF Reader mune Yako WordPress saiti ine Optional Downloader | Martech Zone
Maitiro ari kuramba achikura nevatengi vangu kuisa zviwanikwa panzvimbo yavo pasina kumanikidza tarisiro yekunyoresa kuti vatore. MaPDF chaiwo - anosanganisira mapepa machena, mashizha ekutengesa, zvidzidzo zvezviitiko, mashandisiro ekushandisa, mazano, nezvimwewo. Semuenzaniso, vatinoshanda navo nevanotarisira vanowanzokumbira kuti tivatumire mapepa ekutengesa kuti vagovere zvipo zvepasuru zvatinazvo. Muenzaniso wemazuva ano ndewedu Salesforce CRM Optimization basa.
Mamwe mawebhusaiti anopa maPDF kuburikidza nemabhatani ekurodha ayo vashanyi vanogona kudzvanya kuti vatore uye vavhure PDF. Pane zvishoma zvakaipira izvi:
PDF Software -Kuti utore uye uvhure PDF, vashandisi vako vanofanirwa kunge vaine software package yakaiswa uye yakagadziriswa pane yavo mbozhanhare kana desktop.
PDF Versions -MaPDF anogadzirwa nemakambani anowanzo aine shanduro uye zvigadziriso. Kana vatengi vako vakachengeta chinongedzo kuPDF yekare, vanogona kunge vaine chinyorwa chekare.
Analytics - PDF ifaira riri pasaiti uye harina chero peji rewebhu rakabatana naro kutora chero data yeanalytics pamuenzi.
Mhinduro ndeyekuisa PDF yako muwebhu peji uye kugovera iyo link pane kudaro. Kana isu tikaisa iyo PDF muPDF reader mukati mewebhu peji, mushanyi anogona kuona iyo PDF, dhawunirodha iyo PDF (kana yakagoneswa) uye isu tinogona kutevedzera mapeji ekuona senge chero imwe peji mukati meGoogle Analytics.
Kana iwe ukaisa iyo PDF Embed Plugin yeWordPress, unogona kuita zvese izvi zviri nyore. Isu tine muenzaniso pane yedu kushambadzira mushandirapamwe. Iyo PDF Embedder plugin inopa ese ari maviri shortcode aunogona kushandisa kana iwe unogona kushandisa yavo Gutenberg chinhu cheiyo default WordPress mupepeti.
Hezvino mhedzisiro inotaridzika pa peji:
Kune chaiko mhuri yemapulagi ayo anopa mashoma maficha:
Chinhu chakachengeteka chinoremadza kurodha pasi.
Kufambisa iyo pagination uye yekusarudza yekurodha bhatani kumusoro kana pasi pePDF.
Kuratidza iyo PDF menyu pane hover kana kuoneka nguva dzese.
Iyo PDF thumbnail plugin.
Nhare inoteerera inotarisa uye kurodha pasi.
Anoshanda zvinongedzo mukati mePDF.
Hapana chikonzero chekukodha chero chinhu, kana iwe uchisimbisa iyo PDF, inozviratidza yega mukati me shortcode!
Ini ndashandisa iyi plugin pane akawanda masosi uye inoshanda mushe. Kupihwa kwavo marezenisi ndekwekusingaperi, saka ini ndatenga chaizvo rezinesi izere iro rinondigonesa kurishandisa pane dzakawanda saiti sezvandinoda. Pa $ 50, ndicho chinhu chikuru.
PDF Embedder yeWordPress
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we PDF Plugins (uye zvakare mutengi).
Tags: kupiswadownload pdfembed pdfsei kutiisa pdfPDFPDF Embedpdf embedderpdf pluginpdf wordpress pluginWordPressWordpress pluginwp pdf
Jan 3, 2011 pa 3: 40 AM
@dknewmedia Maita basa nechinyorwa chenyu chekuisa PDF! Nyore kutevera, yakashanda sezango, uye zvakanyanya kupfuura zvese, yakabatsira kugadzirisa dambudziko. Bravo! Ramba uchitaura zvakanaka.